Madaxawayne Farmaajo oo saxiixay sharciga isgaarsiinta dalka, muxuu ka dhiganyahay sharcigu? – Radio Daljir
Madaxawayne Farmaajo oo saxiixay sharciga isgaarsiinta dalka, muxuu ka dhiganyahay sharcigu?
Oktoobar 2, 2017 2:31 g 0
Madaxwaynaha dowlada faderaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa maanta saxiixay sharciga isgaarsiinta dalka oo horay uu ansixiyay baarlamaanka Soomaaliya, kaasi oo awood siinaya dowladda inay maamusho dhammaan shirkadaha isgaarsiinta ee dalka.
Sharciga oo muddo dheer ay kasoo shaqeeynayeen baarlamaanadii kale duwanaa ee dalka, ayaa waxaa horay uu usoo maray labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, waxaana soo diyaariyay wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta dalka.
Munaasabad kadhacday xarunta maadaxtooyada Villa Soomaaliya oo ay ka qaybgaleen guddoomiyeyaasha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo madawaynaha dowladda faderaalka ayaa lagu qabtay xarunta madaxtooyada, iyadoona lagu soo bandhigay sharciga.
Madaxwaynaha dowlada Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo ka hadlayay munaasabadda ayaa sheegay sharcigan in waqti badan la geliyay, islamar ahaantaana lagu dhaqmo.
Muxuu kadhiganyahay sharciga cusub ee isgaarsiinta dalka?
“Xeerka Isgaarsiinta Qaranka waxaa loogu talo galay inuu difaaco xuquuqda shirkadaha iyo dadweynaha intaba waxa uuna muhiim u yahay horumarinta Isgaarsiinta dalka, haddii sharcigaas uu meel marana waxaa billaaban doona isla-xisaabtan iyo horumarin’”ayuu yiri Wasiirka Boostada, Isgaarsiinta iyo Tiknoolojiyada Soomaaliya, Eng Cabdi Canshuur Xasan.
Baanka Adduunka oo horay usoo bandhigay warbixin ku saabsan dhaqaalaha Soomaaliya ayaa Dowladda usoo jeediyay in ay canshuur gaareysa 5%-10% saaraan lacagaha kaararka ku hadalka taleefonada ama Landline-ka.
Madaxweyne Gaas oo Xariga ka Jaray Suuq Cusub oo Boosaaso (dhegayso)